စျေးကွက်ရှိမီးသီးအမျိုးအစားများ၊ မည်သည့်တစ်ခုရွေးရမည်နည်း။ | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
TomàsBigordà | | စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း, အိမ်စီးပွားရေး, ပတ်ဝန်းကျင်
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောရှင်းပြပါလိမ့်မယ် မီးသီးအမျိုးအစားများ, ၄ င်းတို့ကိုအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည့်အိမ်များသို့မဟုတ်ရုံးများတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
စင်စစ်အားဖြင့်လက်ရှိ ၁၈% သည်အိမ်များတွင်မီးထွန်းခြင်းနှင့် ၃၀% ကျော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ငွေတောင်းခံလွှာ၏ရုံးခန်းများတွင်သုံးစွဲသည်။ ကျွန်တော်အမျိုးအစားတစ်ခုရွေးချယ်ပါက လုံလောက်သောအလင်းရောင် အသုံးပြုမှုတစ်ခုစီအတွက်၊ 20% မှ 80% စွမ်းအင်ကိုချွေပါ။
1 မီးသီးအမျိုးအစားများကိုမသိမီစဉ်းစားရန်ရှုထောင့်များ -
2 Lumens ဆိုတာဘာလဲ။ သူတို့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲ
4.1 အကောင်းဆုံး Led မီးသီး
4.2 အကောင်းဆုံး Eco halogen မီးသီးများ။
4.4 အကောင်းဆုံး Fluocompact မီးသီး။
၁ ။ သောမီးသီးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုစားသုံး watts က (w) ဖြစ်ကြသည်။
၃မီးသီးအမျိုးမျိုးသည်ရွေးချယ်မှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ထုတ်လွှတ်မည့်အလင်းသည်အဝါရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် LED, eco halogen သို့မဟုတ် fluocompact ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သင်နှစ်သက်သောနည်းပညာပေါ်မူတည်သည်။
၄ မီးသီးတစ်လုံးချင်းစီသည်မည်မျှအကြိမ်မည်မျှဖွင့်နိုင်သည်၊ ပိတ်နိုင်သည်ကိုသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တည်ရှိနေသောမီးသီးအမျိုးအစားအားလုံးကိုရွေးချယ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အခြားရှုထောင့်များလည်းဖြစ်သည်။
စိတ်ထဲမှာထားရမယ့်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုက စွမ်းအင်ချွေတာမီးသီး ငါတို့သည်သင်တို့၏အဆိုအရသူတို့ကိုအရေအတွက် အလင်းရောင်အတိုင်းအတာယူနစ်မှတစ်ဆင့်“lumens"ဒါမှမဟုတ်"lumensထုတ်လွှတ်လိုက်သောအလင်းပမာဏကိုဖော်ပြသည်။
အဲဒီအစား, အထက် incandescent မီးသီး သူတို့တိုင်းတာခဲ့ကြသည် ဝပ် (W), ဘယ်လောက်ညွှန်း လျှပ်စစ်မီး စားသုံး
Lumens ဆိုတာဘာလဲ။ သူတို့ဘယ်လိုတွက်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးမေးရမည့်မေးခွန်းကတော့ Lumen ဆိုတာဘာလဲ?
အဆိုပါ lumens သည် luminous flux ကိုတိုင်းတာရန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတိုင်းတာမှုစနစ်၏ယူနစ်ဖြစ်သည် ဦး ဆောင်သည့်မီးသီးတစ်ခုစီသည်များသောအားဖြင့် ၆၀ မှ ၉၀ lumens အကြားဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်၊ တ ဦး တည်း 15W LED မီးသီး ကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ် အကြောင်းကို 1050 lumens ၏အလင်း output ကို။ 65W incandescent မီးသီးတစ်လုံးထုတ်လွှတ်လိုက်သောအလင်းသည်မည်မျှသို့မဟုတ်နည်းသည်ဖြစ်စေ။
ဤညီမျှခြင်းသည်အောက်ပါပုံသေနည်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ် Lumens = Watts နံပါတ် ၇၀.
ရှင်းပြပြီးသောနောက်တွင်သိခြင်းပါဝင်သောလက်တွေ့ကျသောဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည် မည်မျှစွမ်းအင်ချွေတာသည့်မီးသီးများလိုအပ်ပါသနည်း အိမ်၌မဆိုအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်နိုင်သည့်အချို့သောအာကာသသည်။
ဘာလဲဆိုတာသိဖို့ အလင်းတန်းအဆင့် အကြံပြုသည်ကျနော်တို့ကိုရည်ညွှန်းရန်ရှိသည် lux ။ ဒါကဖြစ်ပါသည် သင်္ကေတ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစနစ်၏ illumination ၏ပြင်းထန်မှု၏ယူနစ် lxပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပုံစံတည်းတစ်စတုရန်းမီတာလျှင် 1 lumen ၏တောက်ပ flux ကိုလက်ခံရရှိတဲ့မျက်နှာပြင်၏ illumination ညီမျှသော။
ဆိုလိုသည်မှာအခန်းတစ်ခန်းသည်မီးသီးတစ်လုံးအားဖြင့်ထွန်းလင်းနေလျှင်ဆိုလိုသည် lumen 400 အခန်းအကျယ်မှာ ၂၀ စတုရန်းမီတာရှိသည်။ အဆိုပါ illumination level ကို 20 lx ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤယူနစ်ကို အခြေခံ၍ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအလင်း၏အဆင့်အတွက်အကြံပြုထားသောကိန်းဂဏန်းများသည်အိမ်ရှိနေရာတစ်ခုစီ၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်။
မီးဖိုချောင်ခန်း အထွေထွေမီးထွန်းရန်အတွက်ထောက်ခံချက်မှာ 200 မှ 300 lx ကြားတွင်ရှိသည်။ (စားနပ်ရိက္ခာဖြတ်တောက်ပြီးပြင်ဆင်ထားသည့်) လုပ်ငန်းခွင်forရိယာအတွက်ဖြစ်သည်။ 500 lx မှထ။
အိပ်ခန်းများ: အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အထွေထွေအလင်းရောင်အတွက် ၅၀ မှ ၁၅၀ lx ကြားတွင်မြင့်မားသောအဆင့်ကိုမပြုလုပ်သင့်ပါ။ သို့သော်ကုတင်၏ခေါင်းတွင်၊ အထူးသဖြင့်ထိုတွင်ဖတ်ရန်၊ ၅၀၀ lx အထိအထိအာရုံစိုက်နိုင်သောမီးလုံးများကိုအကြံပြုသည်။ ကလေးများအခန်းများတွင်အကြံပြုသည် အနည်းငယ်ပိုပြီးယေဘုယျအလင်းရောင် (150 lx) နှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဂိမ်းကစားကွင်းရှိပါက 300 lx ခန့်ရှိသည်။
ဧည့်ခန်း: ယေဘုယျအလင်းရောင်သည် ၁၀၀ မှ ၃၀၀ အတွင်းအကြားကွဲပြားနိုင်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်လျှင်အိပ်ခန်း ၅၀ ထက်နည်းသောလမ်းဘေး ၅၀ ခန့်ဖတ်ရန်နှင့်ဖတ်ရန်အကြံပြုသည်။ တစ်ခုအလင်းရောင် 500 lx အာရုံစူးစိုက်။
ရေချိုးကန် မင်းကအလင်းအများကြီးမလိုဘူး၊ ၁၀၀ lx လောက်လုံလောက်ပြီ၊ မှန်inရိယာထဲမှာမှလွဲ။မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်း၊ မိတ်ကပ်နှင့်ဆံပင်ကိုဖြီးရန် - ထိုတွင်လည်း ၅၀၀ lx န်းကျင်ကိုအကြံပြုသည်။
လှေကားများ၊ စင်္ကြံများနှင့်အခြားလမ်းသွားလမ်းလာများသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုခြင်း။ စံသည်ယေဘုယျအလင်းရောင် ၁၀၀ lx ဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံး Led မီးသီး
၎င်းသည် Emitting Diode အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ The မီးသီးများ ဦး ဆောင်ခဲ့သည် ၎င်းတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည့်အတွက်အကျိုးရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့သည်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ CO2 သို့များများစားစားမထုတ်လွှတ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် မီးသီးအမျိုးအစားများနှင့်လည်းအဖြိုက်နက်သို့မဟုတ်မာကျူရီကိုမတင်ပြပါ။
ငါတို့သည်လည်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလျှင် အဓိကအင်္ဂါရပ်များ မီးသီးအမျိုးမျိုး၏သက်တမ်းသည် LED မီးသီးများကိုနာရီပေါင်းငါးသောင်းခန့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သုံးစွဲမှု၏စုဆောင်းငွေသည်သိသိသာသာထက်ပိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၈၀% ဝန်းကျင်ထက်လျော့နည်းစွာသုံးစွဲလိမ့်မည် အခြားမည်သည့်အစဉ်အလာ incandescent မီးသီး။
အကောင်းဆုံး Eco halogen မီးသီးများ။
ဤမီးသီးများမှထုတ်လွှတ်သောအလင်းသည်အထူးသဖြင့်သဘာဝကျပြီးသူတို့ချက်ချင်းဖွင့်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးဝင်သောဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံမှန်အားဖြင့်နာရီပေါင်းနှစ်ထောင်ခန့်ရှိပြီးစာအိတ်တစ်လုံးကိုစားသုံးလေ့ရှိသည် သုံးပုံတစ်ပုံလျော့နည်းသည် ကျနော်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်ပေးသွားကြသည်သောမီးတောက်လောင်နေသောသူတွေကိုထက်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, 2009 ကနေစ။ , ကထုတ်လုပ်ခဲ့သည် စျေးကွက်ထဲမှဤမီးသီးအမျိုးအစားများကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအရောင်တောက်ပမှုအားဖြင့်တူညီသောရလဒ်ကိုပေးနိုင်သောပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုထုတ်ပေးသော်လည်းသုံးစွဲမှုအလွန်နည်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတွင်သံသရာအမြောက်အများရှိပြီးအပူထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထုတ်လွှတ်ခြင်းများမပြုလုပ်ပါ မှန်ကန်စွာအရောင်။
အကောင်းဆုံး Fluocompact မီးသီး။
ဤမီးသီးအမျိုးအစားများကိုလူသိများသည် အနိမ့်စားသုံးမှု; နာရီပေါင်းတစ်သောင်းမှတစ်သောင်းကြားအသုံး ၀ င်ပြီးရိုးရာမီးသီးများထက် ၇၅ မှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအကြားသုံးစွဲမှုနည်းသည်။
ဒါကြောင့်ချွတ်ပေးသောအလင်းရောင်သည်ဤ စွမ်းအင်ချွေတာသည့်မီးသီးအမျိုးအစားများ ၎င်းတို့ကိုအကူးအပြောင်းinရိယာများတွင်အသုံးပြုရန်မသင့်တော်ပါ။ အရာအားလုံးကိုမပူဇော်မီစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသောကြောင့်ဖြစ်သည် သင့်ရဲ့အလင်းရောင်၏စွမ်းအားကို။
a) ရောက်ဖို့အချိန်မီးသီးယူတယ် အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်မည်မျှလျင်မြန်စွာဖွင့်သည်။
b) Aperture angle (သို့) light beam ပေါ့။ အလင်းသည်ပိုမိုတိကျသောအချက်ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
c) ထိုမီးသီး၏အသုံးဝင်သောဘဝ, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ မီးသီး၏အလင်းကြာသောနာရီ။
d) အမြင်တစ်ခုဗေဒအချက်အနေဖြင့်, ကျနော်တို့ပုံစံများကိုတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံး, လှည့်လည်, လိမ်သို့မဟုတ်ဖယောင်းတိုင်မီးသီးရှာနိုင်သည်။
e) ၎င်း၏အချင်းနှင့်ပေါ်မူတည်။ ဘုရ်ှ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများလည်းရှိပါတယ် ချည်အမျိုးအစား အဲဒီရှိသည်။
f) အကြိမ်အရေအတွက်အလင်းမီးသီး ဖွင့် / ပိတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏သံသရာများဖြစ်သည်။
g) အလင်း၏သို့မဟုတ်စွမ်းအား၏စွမ်းအားကို ပို၍ များပြားစေသောပမာဏဖြစ်သည် lumens ကျနော်တို့ပိုကြီးတဲ့အလင်းပမာဏကိုရပါလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း » မီးသီးအမျိုးမျိုး